Device type unknown တွေ့တိုင်းကြောက်ဖို့လိုလား...? | Online Service Center Myanmar -->
Device type unknown တွေ့တိုင်းကြောက်ဖို့လိုလား...?
Device Type Unknown နဲ့တွေ့တိုင်း အသဲအသန်လာမေးတတ်ကြသူများအတွက် ဒါလေးကိုရေးပေးလိုက်တာပါ။ Account Settings => Security and Login ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာတွေ့ရတဲ့ Where your login အောက်မှာ ကိုယ်နေတာကရန်ကုန်ပေမယ့်၊ Mandalay, Myanmar. လို့ပြနေတာတွေ၊ မန္တလေးပေမယ့် Yangon, Myanmar. လို့ပြနေတာတွေ။
မြန်မာပြည်ကသုံးနေပေမယ့်၊ US ( United State ) လို့ပြနေတာတွေ။
က ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆိုရင်....
သုံးနေတဲ့ ဆင်းကတ်ပေါ်မူတည်ပြီး အဲ့ဒါက ပြောင်းတတ်တယ်။
MPT တို့ Ooredoo တို့ဆိုရင် Yangon, Myanmar. လို့ အများဆုံး ပြတတ်တယ်။
Telenor ဆိုရင် Mandalay, Myanmar. လို့အများဆုံး ပြတတ်တယ်။
Mytel ဆိုရင် US ( United State ) ဆိုပြီးပြတတ်တယ်။
အဲ့ဒီလို ပုံသေပြလားဆိုတော့ ပုံသေလို့ပြောလို့မရသေးဘူး။ အဲ့ဒီ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာတွေက ဆာဗာချိန်းရင်တော့ သူချိန်းတဲ့ မြို့နာမည်ပေါ်နေမှာပဲ။
နောက်ပြီး ကိုယ်က VPN သုံးမိတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ကိုယ်နေတဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့အခြား Location တခုခုကိုပြတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်က မသင်္ကာရင် ကိုယ်ဝင်ထားတာတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာပဲ သေခြာ စစ်ဖို့လိုတယ်။
တော်တော်များများဆို လာလာပြကြတယ်၊ အစ်ကိုရေ Device Type Unknown ဆိုပြီးပြနေတယ်၊
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ Password ချိန်းရမှာလား၊ သူများဝင်တာလား၊ အကောင့်ခိုးခံနေရပြီလား၊ ဆိုပြီး လားလား လားပေါင်းများစွာနဲ့မေးတတ်ကြပါတယ်။
သေခြာစစ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုပြတာတွေက ကိုယ့်ဖုန်းထဲကနေ သုံးနေရင်ကိုပြတတ်ပါတယ်။
အများဆုံးပြတာတွေက Messenger, Page Manager, Ads Manager, တွေသုံးတဲ့သူတွေရဲ့အကောင့်တွေမှာ အပြများတတ်ပါတယ်။
အပေါ်ဆုံးမွာ Device Type Unknown ပြနေရင် မပူပါနဲ့အဲ့ဒီမှာ Active Now ဆိုပြီးပြနေရင် အဲ့ဒါက လက်ရှိဝင်ထားတဲ့ Device ပါပဲ။
ဒါဆို အောက်နားလေးတွေမှာပြတာဆိုရင်ရော ဆိုရင်...
Device Type Unknown လို့ ပြပေမယ့် အဲ့ဒီနောက်မှာ Yangon, Myanmar. တို့ Mandalay, Myanmar. တို့ဆိုပြီး ပါ ပါတယ်။ လိုက်ထောက်ကြည့်ပြီး IP နံပါတ်လေးလေးတွေကို တိုက်စစ်ကြည့်ပါ။ Device Type Unknownမှာတွေ့ရတဲ့ IP နဲ့ ကိုယ့် Device မှာ ပြထားတဲ့ IP နဲ့တူညီနေရင် ကိစ္စမရှိပါဘူး။
နောက်ပြီးတော့ Device Type Unknown ဆိုတာလေးတွေရဲ့အောက်နားမှာ Facebook App, Messenger, Page Manager, Ads Manager, ဆိုပြီးလည်း ကပ်ပြီးပြထားတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝင်တာဟုတ်မဟုတ် တိုက်စစ်တတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ နောက်ဆုံး Device Type Unknown ဆိုပြီးပြထားတာမှာ Login ၀င်တဲ့ Date and Time လေးတွေပါ ပါပါတယ်။ သေခြာစစ်ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်ဝင်တာလား သူများဝင်တာလားဆိုတာ ရှင်းရှင်းကြီးသိရပါတယ်။
အကုန်တိုက်စစ်ကြည့်လို့မှ ကိုယ်ဝင်သုံးတဲ့အချိန်၊ ကိုယ်ဝင်သုံးနေကျအရာ၊ ကိုယ့်သုံးနေတဲ့ Network IP, ကိုယ်ဝင်သုံးနေကျ Device တွေထဲကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ Access ဖြစ်နေတဲ့ Login Device တွေကို Log Out လုပ်၊ Password အမြန်ချိန်းပြီး Security ပိုင်းတွေကို Check ပြန်လုပ် ( Security ပိုင်းကိုစစ်ဆေးပြီးမြှင့်သင့်တာမြှင့်လုပ် )ဖို့လိုပါတယ်။
ကဲ… ဒီလောက်ဆိုရင် Unknown Device တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသွားကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အကောင့် Security ပိုင်းဘာမှမလုပ်ထားရသေးရင် ဒီပို့=> FacebookAccount Hack လုပ်( ခိုးယူခြင်း )မခံရအောင်ကာကွယ်ပါ ထဲမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုပြီးလိုက်လုပ်ထားလိုက်ပါ။
အခြားသိလိုသည်များရှိပါက m.me/aungkyawsoe.sb နှင့်
Aung Kyaw Soe ( 11.4.2019 – 3:21 PM )